Robot AI famonoana mikraoba AI China AIStrike fanamboarana sy ozinina | Doneax
Sterilizer ultraviolet finday marani-tsaina amin'ny finday
(Robot famonoana jiro mazava ho azy mazava tsara) AIStrike masontsivana ara-teknika
1) Mampiasà fomba ara-batana hamonoana otrikaretina.
2) Jiro pulse xenon, lava-pahazavana arc ≥370 mm, refesim-pahazavana 2 Hz, ny rafitra dia mamantatra ny jiro ho azy
Fiainana Tube, mampiasa masontsivana.
3) Ny isan'ny famerenam-bola sy ny famoahana ny capacitor fandefasana herinaratra avo dia ≥50 tapitrisa heny, ary ny rafitra dia mamantatra avy hatrany ny fipetraky ny capacitor mivoaka ary mampatsiahy ny fanoloana ilay capacitor efa lany daty.
4) Famakiana herinaratra fampidiran-tsofina: 220V / 50HZ, valin'ny famoahana: 48V15A.
5) Sterilization factor, volavola mangatsiaka feno hazavana 200-1100nm ao anatin'izany ny 200nm-315nm
Taratra ultraviolet, onja ultraviolet, miaraka amin'ny halavan'ny 250nm-280nm (amin'ny metatra 1) ≥60000uw / ​​cm2.
6) Ny tahan'ny famonoana an'i Acinetobacter baumannii AB-CR aorian'ny fandefasana 5 minitra dia ≥99.9%,
Aorian'ny 5 minitra fanirahana, ny tahan'ny famonoana ny Candida albicans dia ≥99,9%,
7) Ny tahan'ny famonoana MRSA ≥99.9% aorian'ny fivoaran'ny teknolojia mitovy sy ny andiana vokatra mitovy mandritra ny 5 minitra (3 metatra)
Ny tahan'ny famonoana an'i Pseudomonas aeruginosa aorian'ny fanentanana 5 minitra (amin'ny 3 metatra) dia ≥99,9%.
8) Ny tahan'ny famonoana ny Klebsiella pneumoniae ≥99.9% aorian'ny fivoaran'ny teknolojia mitovy sy ireo andiana vokatra mitovy mandritra ny 5 minitra (amin'ny 3 metatra),
Ny tahan'ny famonoana an'i Acinetobacter baumannii ≥99.9% aorian'ny famafana mandritra ny 5 minitra (amin'ny 3 metatra),
Ny tahan'ny famonoana bakteria voajanahary aorian'ny fandrehitra 5 minitra (amin'ny 3 metatra) dia ≥99.7%.
9) Ny ora famonoana otrikaina dia azo apetraka amin'ny 5-10 minitra, ny tariby famonoana otrikaina dia tsy latsaky ny 3 metatra, ary ny fiasan'ny famonoana desinfection dia azo apetraka arakaraka ny haben'ny zavatra famonoana otrikaina sy ny efi-trano; ny ora fanisana dia azo apetraka sy hita;
10) Atsangana sy ampidinina ho azy ny fantsom-jiro, ary tsy latsaky ny 50CM ny fikolokoloana. Ny fantsom-boahangy quartz avo-permeability avy any ivelany dia ampiasaina ho an'ny famonoana otrikaretina avo lenta sy fanamorana. Ny eo an-tampony dia manana harato famoahana sivana ozon hamono sy hanivana ny ozon.
11) Ny alim-baravarankely vita amin'ny mirror dia ampiasaina hamoronana endrika azo itarafana. Ny fitaratry ny alim-baravarankely dia ≥90%, izay mampitombo ny herin'ny hazavana miposaka ivelany.
12) Vonona ny hampiasa ny rafitra. Aorian'ny asa dia ≤0.1mg / m³ ny fifantohan'ny ozone (omena ny tatitra momba ny fanandramana), ary tsy misy simba ny tontolo iainana toy ny fitaovana, plastika vy, varavarankely, ambainy sns.
13) efijery mahaliana capacitive 7-inch, ny rindrambaiko amin'ny efijery mikasika dia misy fampahatsiahivana famaranana disinfection, fananganana jiro, fampidinana jiro, manomboka flashing, atsaharo ny flashing, ny fametrahana ny rafitra, ny fametrahana parameter ary ny bokotra fiasa hafa. Asa fitantanana manan-tsaina, fanaraha-maso mandeha ho azy ny fizotran'ny famonoana otrikaretina, firaketana mandeha ho azy ny angon-drakitra mifandraika amin'ny famonoana otrikaretina tsirairay, ny rafitra dia manangona avy hatrany ny angon-drakitra isaky ny maodelin'ny rafitra, ary manana fiasan'ny fanairana mandeha ho azy. Ny lavitra takelaka tsy misy tariby dia manana fiasa mitovy amin'ny efijery fiasan'ny singa lehibe indrindra.
14) Izy io dia manana ny fiasan'ny scanning automatique sy ny fitehirizana ny saritany, ny fivezivezena mandeha ho azy, ny famerenana ho azy, ny fisorohana ny sakana mandeha ho azy, ny fanairana mandeha ho azy ary ny fiasa hafa, tsy misy fitsabahan'ny tanana, famonoan-tena mandeha ho azy.
15) Ampiasao ny maodelin'ny scanning laser, ny modely fakan-tsary 3D roa ary ny radar ultrasonic, ny fisorohana ny sakana mandeha ho azy ary ny fitetezana mandeha ho azy.
14) Miaraka amin'ny interface interface, azonao atao ny miditra amin'ny rindrambaiko fitantanana rahona manan-tsaina mba hahatsapana ny fanaraha-maso ny satan'ny masinina, ny firaketana ny angon-drakitra, ny fangatahana, ny fitadiavana ary ny asa hafa.
15) Ny mpanamboatra dia nandalo ny fanamarinana SIO9001, ny vokatra teknolojia mitovy dia nandalo ny fanamarinana CE, ny vokatra teknolojia mitovy dia manana tatitra fikarohana vaovao, ary ny vokatra teknolojia mitovy amin'izany dia manana mari-pahaizana momba ny patanty.
16) Io vokatra ara-teknika io dia manome lisitry ny hopitaly an-trano 10 mihoatra ny kilasy A.
Type Fitaovana Sterilisation Ultrasonic
Laharana maodely AIStrike
Color Volondavenona volondavenona
Fotoana famonoana otrikaretina 5-10Minutes
Ny halavan'ny arc mamirapiratra ≥370mm
Taratra famonoana otrikaretina tsy latsaky ny 3 metatra
Ny fikororohana ny jiro tsy latsaky ny 50CM
Fifantohana ozon aorian'ny asa ≤0.1mg / metatra toratelo
efijery mikasika capacitive mahay 7 santimetatra
Fiainana jiro In-4 tapitrisa
Lanja afa-karatsaka 115kg
1) Fikarohana mandeha ho azy: miaraka amin'ny rafitra terminal feno, aorian'ny fametrahana ny faritra famonoana otrikaretina, tonga eo amin'ny toerana itodiana ireo fitaovana ireo;
2) Fisorohana ny sakana mandeha ho azy: Rehefa sendra vato misakana ianao dia hisoroka irery ny fitaovana, hanomana làlana vaovao ary ho tonga any amin'ny faritra famonoana otrikaretina;
3) Famerenana mandeha ho azy: Rehefa tsy ampy ny bateria dia hiverina ho azy eo amin'ilay toerana voatondro hamandrihana azy ny fitaovana;
4) Famonoana olona manan-tsaina: Midira amin'ny paroasy famonoana otrikaretina arakaraka ny làlana efa nomanina, ary ny mpiasan'ny fitsaboana dia tsy mila miditra mivantana amin'ny paroasy, ary miaro amin'ny fomba mandaitra ny fifindran'ny aretina.
Robot mamono otrikaretina maivana AI
1) Fotoam-pamonoana vetivety: 5 minitra ny famonoana otrikaretina, paroasy maro isan-andro no azo diovina;
2) Fanaparitahana be dia be: ny radius sterilization dia mety hahatratra 3m, ny fahazavana taratra sy ny fifantohan'ny sivana dia afaka manazava mivantana ny haavon'ny fifandraisana matetika, ary manadio ireo toerana mora tsinontsinoavina, izay afaka manala ny mikraoba amin'ny ankapobeny sy mahomby kokoa;
3) Fanaparitahana tanteraka: ny tarika feno ultraviolet (200-315nm) ary ny teknolojia famonoana otrikaretina sy fanamorana tanteraka dia mety hamono otrikaretina sy bakteria tsy mahazaka zava-mahadomelina;
4) Fandidiana mora: rafitra fitantanana rindrambaiko manan-tsaina mifototra amin'ny rahona, vonona hampiasaina;
5) Fiarovana ny tontolo iainana ary maharitra: tsy misy fahasimbana sy famonoana otrikaretina, tsy misy residu simika, tsy misy residues manimba.
Jiro Xenon Sombiny 1
Solomaso anti-UV Tsiroaroa 2
Rindrambaiko fototra robot 1 napetraka ao anaty masinina manontolo
Manangona antontam-bato 1 napetraka
Tady herinaratra 1piece
Oblibratera Phillips 1piece
Manaraka: Robots, mpamono otrikaretina finday PulseIn-D